एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ? – Kavrepati
Home / राजनिति / एमाले फुट्न कति चाहिन्छ संख्या ?
admin July 28, 2021	राजनिति Leaveacomment 97 Views
Previous अस्पताल लैजाँदै गर्दा बेहोस भएका विजय शाहीको मृत्युको खबर कसरि भयो भाइरल ?
Next श्रीमान श्रीमती नै शिक्षक थिए, अहिले गाउँलेहरूले नै बनाइदिए भिख माग्ने
चितवन । नेकपा एमालेका निर्वाचित ६ उपाध्यक्षहरुमध्ये रामबहादुर थापा बादलको सबैभन्दा कम मत आएको छ …